Ihe ị ga-ahụ na Dinant, Belgium | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Belgium, Ihe ị ga-ahụ
Nri nri Ọ bụ ọmarịcha obodo Belgium nke dị nso na ókèala France. Ọ bụrụ na oge okpomọkụ a ịchọrọ ịga ije na nkuku Europe mara mma mgbe ahụ Belgium nwere ike ịbụ ebe ị na-aga ma ebe a, Nri abalị.
Coast on the river, a kediegwu ọgba, ikekwe otu n'ime ndị kasị mma na Europe, saxdlehone, Katidral Gothic, nnukwu ụlọ elu mara mma nke nwere ndagwurugwu na nnukwu gastronomy na-etinye uche n'ihe kachasị mkpa nke njem nleta nke Dinant na-enye. Ka anyị chọpụta ihe ndị a ọnụ.
1 Nri, ada nke Meuse
2 Ihe ileta na nri
Nri, ada nke Meuse
Ọ dị na mpaghara ndị Belgium nke Namur na ndagwurugwu Osimiri Meuse, ọ bụ ya mere o ji enweta aha Ada nke Meuse. Namur bụ otu n’ime mpaghara ise nke Wallonia, mpaghara Belgium ebe nde mmadu ato na ọkara bi, ihe kariri 30% nke ndi obodo. Emepụtara Wallonia n'ihi ngagharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mpaghara nke chọrọ nnabata akụkụ dị iche iche nke mpaghara a na nke mezuru ya na 1970.
Mana n'eziokwu akụkụ a nke Belgium nwere ọtụtụ puku afọ nke akụkọ ntolite. Ọ bụ romanized n'okpuru aka Julius Caesar na n'ihi njikwa ya nke igwe, oge gbanwere ndị bi na ya ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ igwe na igwe. Wallonia ohuru a bidoro na narị afọ nke iri na iteghete ma bụrụkwa onye nkwalite nke esemokwu na nkewa nke ihe eji egwu mba nke ga-enwe ike karịa agha ụwa abụọ. Iguzosi ike na ịdị n'otu mba ga-enweta naanị afọ iri anọ gara aga.
Nri, ọ na-akpọ ihe dị ka Na-achọ, ọ dị ihe dị ka kilomita iri itoolu site na Brussels na kilomita 30 site n'isi obodo mpaghara ahụ, obodo Namur n'onwe ya. Ọ dị na ndagwurugwu nwere oke okwute n'akụkụ ugwu na-eche osimiri ahụ ihu na ndị izizi biri na ụsọ mmiri wee malite ịkwaga n'ime ime, wee mepụta, ọtụtụ narị afọ, obodo dị warara n'akụkụ osimiri ahụ.
Taa Dinant nwere agwaetiti nke emere na narị afọ nke XNUMX mgbe otu alaka nke osimiri jupụtara na ya. a na-akpọ agwaetiti ahụ Île des Batteurs, ọ na-ejikọtakwa ya na obodo ahụ na ndagwurugwu. Ọ bụ ezie na mpaghara ahụ nwere njikọ dị mkpa na iron, obodo ahụ n'onwe ya bụ ọkachamara na-arụ ọrụ na ọla kọpa, na mgbakwunye, ọ raara onwe ya nye ọrụ ugbo na iwepụta limestone na oji mabụl, dịka ọmụmaatụ.
Ihe ileta na nri
La Katidral nke Nwanyị Nwanyị Anyị Ọ bụ ụlọ nsọ nke Othdị Gothic nke narị afọ XNUMX Ewubere ya iji dochie anya ụka nke Romanesque nke dara ada na 1228. Taa, naanị ọnụ ụzọ ugwu ka fọdụrụ na ya.
Ọ bụ nnukwu ụka nke na-achịkwa mbara igwe nke obodo ahụ kemgbe ahụ na taa enwere njem njegharị n'ime n'ihi na, ọ bụ naanị site na windo windo ndị ahụ ka nwere ike inwe mmasị na ya. Ọ rụziri na wughachi ọtụtụ ugboro na N'ezie mgbe agha ụwa abụọ na-dị ka mma. Ọbịbịa ahụ kwesịrị ịmalite site na mbara elu iji hụ ihe ndị Gothic si n'èzí, ụlọ elu ya na windo ya, karịsịa nnukwu ụlọ elu bulbous nke bụ mgbakwunye XNUMXth nke narị afọ.
N'ime baroque na-enwu, na ụlọ, na ogidi ya na na eserese ya nke Antoine Wiertz mere na narị afọ nke XNUMX, onye na-ese ihe si n'otu obodo ahụ. A na-akpọ ihe osise Anyị ga-ezute ọzọ n’eluigwe ọ bụkwa ọrụ a raara nye nne na nna ya. E nwekwara ndị yi tụrụ àgwà, ụfọdụ okpukpe na ndị ọzọ geometric. N'ihu ebe ịchụàjà ahụ mara mma nke nwere ọmarịcha osisi na nnukwute obe nke e konyere Jizọs ahụ e kpogidere.
Ahapụla n'ụlọ nsọ na-enweghị na-aga site na baptism nke sitere na narị afọ nke XNUMX na ebe ikpo okwu site na narị afọ nke XNUMX mere si a metal mepụtara nanị na-eri nri na mbubreyo Middle Ages na-akpọ dinandrie. Site na katidral ị ga - anọ ole na ole site na ịmalite ịrịgo mara ụlọ elu na-enwe kediegwu echiche ọ na-enye.
Site na nnukwu ụlọ ị pụrụ ịhụ ndagwurugwu na gburugburu ya. Iji rute ebe ị ga-arịgo elu 408 mana ọ bụrụ na ịchọghị ịga ije nke ukwuu, ịnwere ike iji ya eriri ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ụgbọ ala jiri ya gbagoo. Nke ọ bụla A na-akwụ ụgwọ ntinye iji banye na nnukwu ụlọ na tiketi akwụ ụgwọ 8 euro ma na-enye ohere ka ebe e wusiri ike na paseeji ya. Ọ bụghị na ọ bụ oké osimiri na-akpali akpali ma ebe ọ bụ na ị nọ ebe ahụ, agaghị m atụ uche ya.
E wuru citadel na XNUMXth narị afọ ịchịkwa ndagwurugwu ahụ na narị afọ ndị sochirinụ a mụbara ya ma wughachi ya. Na 1703 ndi French bibiri ya na ụdị nke a ka emechara, site na mbido narị afọ nke iri na iteghete mgbe United Kingdom nke Netherlands dị. Ya na nnukwu ụlọ obibi nke Namur, Liège na Huy ọ bụ akụkụ nke ihe a na-akpọ Citadels nke Meuse.
Na mbido m kwuru na Dinant bụ otu n’ime ọgba ndị mara mma na Europe na n'ezie ndị kasị mma na Belgium. Na Ọgba La Merveilleuse Achọpụtara ya na 1904 ma ọ dị ebube maka nghọta na ịma mma nke mmiri mmiri ya na stalactites. Ọgba bụ nzọụkwụ site na etiti, banyere 10 nkeji ihe ọ bụla ọzọ, na enwere njem njegharị n'ime ha ga-ewe gị ihe dị ka mita 40 n'okpuru ala ma mechaa otu elekere. Ọnụ ụzọ nke ọgba na-efu euro 9 na n'ime ya bụ oyi, na nkezi ọ bụ 13 ºC mgbe niile, yabụ weta uwe elu.
Anyị na-ekwukwa banyere ya Nri bụ ebe ọmụmụ nke saxophone Ya mere, ọ bụ n'ihi na na Dinant ka amụrụ onye mepụtara ya, Adolphe sax, nwoke amụrụ ma nwụọ na narị afọ nke XNUMX na onye na-emepụta ngwa egwu. Ọ bụ nwoke na-achọ ịmata ihe nke na-anwale ngwa egwu ma ọ bụrụ na ihe anaghị emechi ya, o mezuru ha. Ọ dị ike, nwee nchekwube na onye na-echepụta ihe n'ezie bụ onye jisiri ike na-agba ọsọ nnukwu ụlọ ọrụ na Paris. N'ebe ahụ ka ọ na-enye saxophone ndụ, n'etiti ngwa ndị ọzọ nke otu ezinụlọ.
Saxophone ahụ na-enye egwu ọhụụ na ụwa egwu ma ọ naghị eji osisi eme ya kama ọ bụ ọla kọpa: a na-eme ya dị ka parabolic cone ma jiri amị na-egwu ya. Sax jisiri ike patent ya mepụtara afọ anọ ka nke ahụ gasịrị, na 1846, na-agabiga ọtụtụ esemokwu, anyaụfụ na ndakpọ olileanya tupu na mgbe emechara. Ọ nwụrụ na February 7, 1894 na ili ya dị na ili ozu Montmartre mana obodo Dinant na-asọpụrụ ya oge niile n'ihi na E kesara 28 nnukwu saxophones, otu maka steeti ọ bụla so na European Union.
Know mara mgbe ahụ, Dinant na-eche gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Belgium » Ihe ị ga-ahụ na Dinant, Belgium